Qalabka Soo Celinta Xogta. Soo kabashada Lost & Faylasha la tirtiray
DataNumen Data Recovery waa ugu fiican qalab kabashada xogta adduunka. Way soo kaban kartaa lost iyo tirtiray feylasha iyo galka kumbuyuutarkaaga intii suurtogal ah, taas oo yareyneysa luminta masiibooyinka xogta.
4.90 / 5 (laga bilaabo 1,650 cod)
maxaad DataNumen Data Recovery?
Xullo Source Drive ama Disk
Xulo Xullada Soo-kabashada
Noocyada Muhiimka ah ee DataNumen Data Recovery v2.4
Taageer nooc kasta oo nidaamyada faylka ah, oo ay ku jiraan NTFS, FAT, FAT32 iyo Ext2.
Taageero inuu ka soo kabsado faylasha lost dib u habeyn wadista, musuqmaasuqa wadida ama sababo kale awgood.
Taageero inuu ka soo kabsado faylasha la tirtiray.
Taageero si looga soo kabsado durdurrada la xiriira lost iyo faylasha la tirtiray.
Taageero si loo baadho xogta disk ceeriin ah si dhammaystiran oo loo raadiyo lost iyo tirtiray feylasha in kabadan 70 nooc oo la yaqaan, adoo adeegsanaya nidaam khabiir gudaha ah oo aqoon balaaran u leh astaamaha iyo qaab dhismeedka qeexida nooca feylka.
Taageero inuu ka soo kabsado faylasha tirtiray recycle bin.
Taageero si looga bogsado lost iyo tirtiray fayl iyo hie gal dhanrardib u curso
Taageer magacyada faylka Unicode iyo magacyada galka.
Taageero si loogu magacdaro faylasha iyo fayllada si otomaatig ah marka nuqul jiro.
Adeegso is-dhexgal saaxir fudud si uu kuugu sheego inaad u marto nidaamka soo-kabashada si fudud oo hufan.
Taageero si loo shaandheeyo loona kala sooco lost iyo tirtiray feylasha iyo faylalka iyadoo loo eegayo shuruudo kala duwan.
Isticmaalka DataNumen Data Recovery inuu ka soo kabsado Faylal ku jira Darawaladaada
Adigu qaab khalad ah ayaad u qaabeysaa darawalkaaga, waxaad si joogto ah u tirtirtay faylasha ama faylalka aad wadato si qalad ah, ama waxaad faaruqisay qashinkaaga dib-u-warshadeynta kahor intaadan helin wax muhiim ah oo ku jira. Maxaad qaban kartaa?
Walaac ma leh. DataNumen Data Recovery kaa caawin kara. Waxaad u adeegsan kartaa qalabkan awoodda badan si aad u baarto darawalada, u raadi lost iyo faylasha la tirtiray, dib u soo ceshada oo hel most xog qaali ah dib kuugu soo celiyo.
Waxaad dooran kartaa darawalka ama diskiga la marinayo, ka dibna riix batoonka "Ok" si aad u start nidaamka iskaanka.
Fiiro gaar ah: Kahor baarista wadista ama diskiga, hubi in aan la fureynin feylal ama fayl kujira wadista ama diskiga. Mana jiraan wax codsiyo kale ah oo galaya darawalka ama diskiga.
Haddii kale, waxaad dooran kartaa sheyga soo socda:
si loo baaro feylasha sawirka halkii aad ka heli laheyd darawal ama disk.
Waxaad sidoo kale dooran kartaa sheygan menu:
in la furo wada hadalka soo socda:
oo aad dejiso xulashada iskaanka ka hor geedi socodka skaanka.
Kadib starxoqin habka iskaanka, baarka horumarka
muujin doonaa horumarka iskaanka. Inta hawshu socoto, waad gujin kartaa
badhanka si loo joojiyo habka iskaanka.
Kadib nidaamka iskaanka, haddii wax lost iyo faylasha la tirtiray ama galka waa la soo celin karaa, waxaad arki doontaa horudhaca faylalkaan:
Hubi faylasha ama fayl aad rabto inaad ka soo kabato, ka dibna riix
badhanka, waxaad arki doontaa wadahadalka soo socda:
Waad dejin kartaa galka wax soo saarka ee wada hadalka oo guji "OK" batoonka start soo kabashada waxyaabaha la hubiyey.
DataNumen Data Recovery ka dibna kuu soo ceshan doonaa dhammaan walxaha la hubiyey adiga. Kadib nidaamka soo kabashada, sanduuqa fariinta ee soo socda ayaa soo bixi doona:
Markaas waxaad furi kartaa galka wax soo saarka oo aad marin u heli kartaa dhammaan waxyaabaha la soo kabsaday.
DataNumen Data Recovery 2.4 waxaa la sii daayay Nofeembar 9th, 2020
DataNumen Data Recovery 2.3 waxaa la sii daayay Abriil 14, 2020
Hagaaji saameynta bandhigga.
DataNumen Data Recovery 2.2 waxaa la sii daayay Febraayo 28th, 2020
Taageero si loo hubiyo feylasha shaqsiga si loo soo kabsado.
Taageero si loo hagaajiyo cabbirka muuqaalka sawirada.
DataNumen Data Recovery 2.1 waxaa la sii daayay Janaayo 8th, 2020
DataNumen Data Recovery 2.0 waxaa la sii daayay Sebtember 19th, 2019
Dib u qor mashiinka iskaanka iyo soo kabashada.
DataNumen Data Recovery 1.0 waxaa la sii daayaa 28da Diseembar, 2010
Taageerada dhammaan qaababka darawallada.
Kabsado files tirtiray on NTFS wadayaasha.